Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. डाक्टरले प्रहरीसंग मिलेर अस्पतालमा मनोमानी गरेको खुलासा – Emountain TV
डाक्टरले प्रहरीसंग मिलेर अस्पतालमा मनोमानी गरेको खुलासा
विराटनगर, २९ साउन । इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले सीटीस्क्यान मेसिन विक्री गर्दा ठगी गरेको आरोपमा करिव डेढ साता अघिदेखि एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ ।
तर अचम्मको कुरा के छ भन्ने जुन व्यक्तिले सामाग्री नपाएको भनी ठगी मुद्दा हालेका हुन् सामाग्री उनकै स्थानमा फेला परेको छ । तर प्रहरीले भने सामाग्री भएको थाहा हुँदा हुँदै पनि रेडियोलोजिष्ट डाक्टर सुनिल देवलाई हिरासत मै राखेको छ ।
रेडियोलोजिष्ट डाक्टर सुनिल देव सीटीस्क्यान मेसिनको विक्रीमा ठगीको आरोपमा पक्राउ परी प्रहरी हिरासतमा छन् । उनलाई प्रहरीले विराटनगरको लाइफलाइन अस्पताल प्रालिका अध्यक्ष डाक्टर तीलकचन्द्र साहलाई सीटीस्क्यान मेसिन विक्री गर्दा ठगी गरेकाे आरोपमा पक्राउ गरेकाे हाे ।
पक्राउ परेका देवलाई प्रहरीले ठगी मुद्दामा दुई पटक अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका प्रहरी नायव उपरीक्षक श्यामल सुब्बाले बताउनुभयो । उनलाई डाक्टर तीलकचन्द्र साहकै जाहेरीका आधारमा पक्राउ गरिएको हो ।
रेडियोलोजिष्ट देवले दश वर्ष अघि डा. साहलाई सीटीस्क्यान मेसिन विक्री गर्न सहयोग गरेका थिए । रेडियोलोजिष्ट देवले डा.साहलाई ५० लाख रुपैयाँमा सीटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्न सहयोग पु-याएका थिए ।
डा. साहले रेडियोलोजिष्ट देवलाई ३२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएपछि वान स्लाइस सीटी स्क्यान मेसिन भारतको दिल्लीबाट खरिद गरिदिएका थिए । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले वान स्लाइसको सीटीस्क्यान प्रयोगमा रोक लगाएपछि डाक्टर साहले सीटीस्क्यान मेसिन प्रयोगमा ल्याएका छैनन् ।
रेडियोलोजिष्ट देवले खरिद गर्न सहयोग गरेर ल्याएको सीटीस्क्यान मेसिन अहिले डाक्टर साहले नै राखेका छन् । तर, डाक्टर देवले अहिलेसम्म पनि आफुलाई सीटीस्क्यान मेसिन नदिएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा उनले डा. देव विरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
प्रहरीलाई पैसाको प्रलोभन देखाएर उनले आफुसंग सो मेसिन नभएको भन्दै डा.देवलाई ठगी मुद्धा दर्ता गराएसंगै अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर तीलकको हर्कत सार्वजनिक भएको हो ।
डाक्टर तीलकले प्रहरीसंग मिलेर अस्पतालमा मनोमानी गरेको र डा. देवलाई फसाउन सीटी स्क्यान मेसिन नै गायव गरेको भनिएको छ । माउण्टेनकर्मीले सीटीस्क्यान मेसिन राखेको स्थानको दृष्य कैद गर्न खोज्दा प्रहरीले नै रोकेको थियो । सो दृश्यले प्रहरीको पनि मिलेमतो छ कि भन्ने शंका उब्जाएको छ ।
डाक्टर तीलक चन्द्र भने यो विषयमा बोल्न मानेनन् । उनी क्यामरा देख्ने वित्तिकै भाग्न खोजे । यसरी सामाग्री आफुसंग हुँदा हुँदै पनि ठगी मुद्दा लगाउने अनि प्रहरीले पनि त्यत्रो दिनदेखि हिरासतमा राख्नुले धेरै प्रश्नहरु सिर्जना गरेको छ ।